अनलाईन कक्षाको समय तपाईंको बच्चालाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ, यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस! -
अनलाईन कक्षाको समय तपाईंको बच्चालाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ, यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस!
२०७७, १५ श्रावण बिहीबार ००:०३ July 30, 2020 clickonLeaveaComment on अनलाईन कक्षाको समय तपाईंको बच्चालाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ, यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस!
कोरोनाभाइरसको कारण व्यक्तिको जीवनशैली पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ। यसले शिक्षामा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको छ। बच्चाहरू अब अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन गरिरहेका छन्।डिजिटल कक्षाले बच्चाहरूलाई सिकाउँदैछ तर बच्चाहरूले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू पनि सामना गरिरहेका छन्, जस्तै – चिड़चिड़ापन, मानसिक समस्या र आँखामा तनाव।
त्यसकारण, बच्चाहरूको स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न, हाम्रो जिम्मेवारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो आमाबाबुको लागि महत्वपूर्ण छ कि उनिहरूले बच्चाको शिक्षाको मात्र ख्याल नगरेर, उनीहरूको स्वास्थ्यको पनि हेरचाह जरुरि छ।
अनलाईन क्लास लिदा यो कुराहरुको ध्यान दिन जरुरि छ
उत्तम आसन –डिजिटल क्लास लिदा सबभन्दा जरुरि हुन्छ बच्चाहरुको पोस्चर यानि बसाई। यसले उनिहरुलाई पीठिउ, कमरको दुखाईबाट आराम मिल्नेछ ।त्यसैले बच्चाहरु राम्ररि बसेका छ छैनन बिचार पुराउनुहोस
आँखाको ख्याल राख्नुहोस् – डिजिटल कक्षामा, सबैभन्दा अधिक असर आँखामा हुन्छ। अनलाइन क्लासहरूमा एन्टि ग्लेयर ग्लास प्रयोग गर्नुहोस्, यसले आँखा दुख्ने छैन। तपाईं चिकित्सा सल्लाहमा राम्रो आईड्रॉपको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
उत्तम गुणवत्ताको अडियो- अडियोको लागि राम्रो गुणस्तरको हेडफोन प्रयोग गर्नुहोस्। यससँग, बच्चालाई जे सिकाइेको छ स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिन्छ किनकि अडियो गडबडीले उसलाई विचलित गर्न सक्छ र राम्रोसँग बुझ्न सक्दैन।
धेरै लामो समय सम्म कम्प्युटर स्क्रिनमा नबस्नुहोस्-
कम्प्युटर स्क्रिनमा लगातार हेर्नाले बच्चालाई तनाव गराउन सक्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले कहिलेकाँही बच्चाहरूलाई केही बाह्य गतिविधिहरूमा सामेल गर्नुहोस।
घरमा हुँदा योग वा प्राणायाम गराउनुहोस-
घरमा बच्चाहरूको व्यायाम धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसले तिनीहरूको तन्दुरूस्ती कायम राख्न मद्दत गर्दछ। बच्चाहरूलाई योग दिनुहोस्, नृत्य चिकित्सा पनि बच्चाहरूको लागि प्रभावकारी हुन सक्छ। केहि इनडोर खेलहरू पनि खेलाउनुहोस।
२०७५, ११ चैत्र सोमबार १६:२९ March 25, 2019 clickon
२०७६, २१ फाल्गुन बुधबार १५:३२ March 4, 2020 clickon